Sintomy ny sary OS X Yosemite ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
OS X Yosemite no rafitra miasa mandroso indrindra eto an-tany, na hoy i Apple. Ny marina dia nandramako izany hatramin'ny nivoahany ampahibemaso ary tsy manana olana aho, Mahafinaritra ahy ny endrika vaovao an'ny interface sy ny fampiharana ary mazava ho azy ireo fiasa vaovao toa ny Handoff. Raha mamaky ahy tsy tapaka ianao dia ho fantatrao fa mpankafy ny famolavolana ny fitaovako aho: apps, wallpaper na tweaks manatsara ny endrika, ary izany no antony itondrako anao ny sarin'ny OS X Yosemite, sary vitsivitsy noforonin'i Apple (amin'ny alàlan'ny default ao anaty Yosemite) ho an'ny fitaovanao rehetra: Mac, iPad ary iPhone. Eo alohan'izay!
Wallpaper X X Yosemite, takiana
Nandritra ny taona maro dia niova tamin'ny fomba maro ny OS X, fa tsy tamin'ny fotopoto-pitsipiny mihitsy: hery, fahatsorana, hatsaran-tarehy. Rehefa namolavola OS X Yosemite dia nitady rafitra fandidiana izay nandroso sy mora ampiasaina kokoa aza izahay, saingy ny iray izay tena marina tamin'ny votoatin'ny Mac. OS X Yosemite dia ny fivoaran'ny voajanahary OS X. Tsy amin'ny famolavolana fotsiny . Ary koa ho an'ny potika goavambe.
Ho an'ny Yosemite ahy, amin'ny lafiny famolavolana, io no rafitra fiasa tsara indrindra nanandramako: minimalism, loko, fandaminana habakabaka sns. Ny sary am-paingotra default dia nifantoka tamin'ny Yosemite National Park (California) ary avy eo ny sary mihetsika izay azonao atao ny misintona manaraka dia hivoaka. Jason Zigrino dia mamatsy vola ny pejiny DevianART ary mizara izany amin'ny tambajotra iray manontolo. Amin'ny ankapobeny dia izy ireo sary mihetsika dimy noforonin'i Apple, natao manokana ho an'ny fitaovantsika:
Mac: Raha manana monitor 4K ianao dia tsara vintana satria ireo fiaviana ireo dia mifanaraka amin'izany famahana izany.
iPad: Eto ianao dia manana ZIP miaraka amina fiaviana rehetra noforonin'i Jason mifanaraka sy namboarina tamin'ny efijery an'ny iPads anay. rohy
iPhone: Toy izany koa, eto ianao dia manana ny valiny dimy OS X Yosemite mifanentana amin'ireo iPhones anao. rohy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Sintomy ny sary OS X Yosemite ho an'ny iPad anao